Nampitsahatra Tafio-drivotra i Jesosy | Fiainan’i Jesosy
Nampitsahatra Tafio-drivotra Teny An-dranomasina i Jesosy
MATIO 8:18, 23-27 MARKA 4:35-41 LIOKA 8:22-25
NAMPITSAHATRA TAFIO-DRIVOTRA TENY AMIN’NY RANOMASIN’I GALILIA I JESOSY
Be atao i Jesosy nandritra ny andro ka reraka. Hoy izy tamin’ny mpianany rehefa hariva: “Andao ho eny ampita”, izany hoe teny ampitan’ilay faritra nisy an’i Kapernaomy.—Marka 4:35.
Faritra nisy ny Gerasianina ny teny ampita atsinanan’ny Ranomasin’i Galilia, ary nantsoina hoe Dekapolisy. Foiben’ny kolontsaina grika ny tanàna tany, na dia be Jiosy aza.
Voamariky ny olona ny nialan’i Jesosy tao Kapernaomy. Nisy sambokely hafa koa nanomboka niampita an’ilay farihy. (Marka 4:36) Tsy dia lavitra ny teny ampita, raha ny marina. Farihy lehibe ny Ranomasin’i Galilia, ka 21 kilaometatra eo ho eo ny lavany, 12 kilaometatra eo ho eo ny sakany lehibe indrindra, ary lalina ilay izy.
Ara-dalàna raha reraka i Jesosy na dia lavorary aza, satria be atao tamin’ny fanompoana. Nitsotra teny amin’ny vodisambo àry izy rehefa niainga ilay sambo. Nataony teo ambony ondana ny lohany dia resin-tory izy.
Maromaro tamin’ny apostoly no efa tantsambo za-draharaha, nefa tsy mora ny dia tamin’io. Misy tendrombohitra eo amin’ny manodidina ary matetika no mafana ny fanambonin’ilay farihy. Mifofofofo indraindray ny rivotra mangatsiaka avy eny an-tendrombohitra ary mihaona amin’ny rano mafana eo amin’ilay farihy, ka miteraka tafiotra tampoka. Izany no nitranga tamin’izay. Tsy ela dia nidona tamin’ilay sambokely ny onja. Nanomboka “nihafeno rano ilay sambokely, ary nananontanona ny loza.” (Lioka 8:23) Mbola natory anefa i Jesosy.
Nanezakezaka namily an’ilay sambo ireo mpianatra. Efa niatrika tafio-drivotra izy ireo ka nampiasainy ny traikefa azony. Hafa mihitsy anefa ity indray mitoraka ity. Natahotra ny ho faty izy ireo ka namoha an’i Jesosy sady niteny hoe: “Tompo ô, vonjeo fa ho faty isika!” (Matio 8:25) Natahotra ny hilentika izy ireo.
Hoy i Jesosy rehefa taitra: “Nahoana ianareo no saro-tahotra, ry kely finoana?” (Matio 8:26) Nandidy ny rivotra sy ny rano izy avy eo hoe: “Mangìna! Mitonia!” (Marka 4:39) Dia nitsahatra ilay rivo-mahery ary tony indray ilay rano. (Nitantara an’io zava-nitranga nahatalanjona io koa i Marka sy Lioka. Notantarainy hoe nampitony ny rano tamin’ny fomba mahagaga i Jesosy, izay vao noresahiny ny momba ireo mpianatra tsy ampy finoana.)
Eritrereto ange ny fihetseham-pon’ireo mpianatra e! Vao teo ry zareo no nahita tafio-drivotra be, nefa tony tanteraka ny rano izao. Raiki-tahotra izy ireo ka nifampiresaka hoe: “Fa iza marina àry izy ity, fa hatramin’ny rivotra sy ny ranomasina aza mankatò azy?” Tonga soa aman-tsara teny ampita ry zareo. (Marka 4:41–5:1) Tafaverina teny andrefana kosa angamba ireo sambo niara-niainga taminy.
Mampahery tokoa ny mahalala fa afaka mibaiko ny toetrandro ny Zanak’Andriamanitra. Hifantoka tanteraka amin’ny tanintsika izy rehefa hanjaka, ka tsy hanana ahiahy ny rehetra satria tsy hisy loza mampahatahotra intsony eo amin’ny natiora.
Inona no nety ho nahatonga an’ilay rivo-mahery teo amin’ny Ranomasin’i Galilia?
Inona no nataon’ny mpianatr’i Jesosy rehefa tsy nahita hevitra intsony izy ireo?
Nahoana no mampahery antsika io zava-nitranga io?
Hizara Hizara Nampitsahatra Tafio-drivotra Teny An-dranomasina i Jesosy